राजनीतिक दललाई खुला पत्र: निष्ठाको राजनीति कहिले गर्ने ? | KTM Khabar
राजनीतिक दललाई खुला पत्र: निष्ठाको राजनीति कहिले गर्ने ?
२०७३ चैत्र १४ गते १५:३१ मा प्रकाशित
१४ चैत - तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको रवैया बिरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने प्रकृया चलिरहदा शिर्ष दल र त्यसको नेत्रित्व ढुलमुले अवस्थामा थियो । यि तिनै दल थिए जसले कार्कीको नैतीक चरित्र र योग्यतामा आम शंका हुँदाहुँदै पनि बुई बोकेर नियुक्ती थमाएका थिए । लोकतन्त्र कती हदसम्म बलियो हुन्छ भनेर संसारलाई देखाउनुपर्ने बेलामा नेपाली राजनीतिक दलले खुट्टा कमाइरहेका थिए । कार्कीको त्राशको भुत राजनीतिक दलहरुमा हावी भईरहेका बेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुईवटा कारण देखाएर उनलाई पदमुक्त गर्‍यो । ति तिनै दुई कारण थिए जुन राजनीतिक दल मात्र होइन आम सर्वसाधारणलाई पनि थाहा थियो ; उच्च नैतीक चरित्र नभएको र नियुक्तीका लागि योग्यता नपुगेको । राजनीतिक दलले मुटु कमजोर बनाइरहेका बेला सम्मनित सर्वोच्च अदालतले देखएको साहसको सर्वोच्चतालाई जनताले हृदयदेखी नै नमन गरे ।
यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । नेपाली राजनीतिक दलले आँट,साहस र दृढता नदेखाउदा धेरै कुराहरु गुमाए । तिनै गुमाएका धेरै कुराहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण एवम् प्राथमिक कुरा हो, जनताको बिस्वास । दलगत स्वार्थमा यतीसम्म केन्द्रित छन् राजनीतिक दलहरु कि जनताका न्युनतम आवश्यकताहरुको पारीपुर्तिमा पनि गम्भिर देखिएका छैनन् । कुनैपनि क्षेत्रको कुरा गरौ, यदी बिस्वास प्राप्त गर्नु छ र त्यसलाई निरन्तर कायम राख्नुछ भने नैतीकता, चरित्र र उद्धेष्यमा खोट देखिनु हुँदैन । यि तीन प्रमुख कुराहरु भनिरहदा हामीले हाम्रो पृष्‍ठभुमी पनि केलाउनै पर्ने हुन्छ । हाम्रो शिक्षा, सँस्कार, संगत अनी समाजमा जे कुरा ब्याप्त थियो हामी त्यसैमा हुर्कियौँ । राजनीतिक दलहरुमा जुन चरित्र हावी छ त्यो वास्तवमै बर्षौदेखी चलीआएको अनैतीक अभ्यासको निरन्तरता हो ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिकै तातो बिषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरौँ, कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई किन न्यायपालिकाले उल्टाउनु पर्‍यो ? प्रहरी महानिरिक्षक जस्तो पदमा बढुवा गर्दा सरकारले के कुरालाई आधार बनायो ? यो बिषयमा आम-जनतालाई प्रस्ट पार्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरकार त फेरबदल भईरहन्छ तर सरकारले गर्ने यस्ता निर्णयले प्रहरी प्रशासनप्रती जनताको छाप कस्तो पर्न जान्छ त्यो कहिल्यै हेक्का राखिदैन । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा योग्यतम् व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने बेलामा निजी स्वार्थमा विवेक गुमाएर गरिने राजनीतिक दलहरुका यस्तै कच्चा निर्णयहरु नै हालको अस्तव्यस्त राजनीतिक माहोलको बिउ हो । यद्यपी, यस् सन्धर्भमा पनि सम्मनित सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले एकातिर न्यायपालिकाप्रती जनताको आस्था र निष्ठाको उचाईलाई अझ बढाएको छ भने अर्कोतिर सरकार र शक्तिको भरमा मनपरी गर्न खोज्नेलाई कसिलो झापड पनि प्रहार गरेको छ । पद र प्रतिष्ठाको ख्याल नै नगरि अदालति इजलास नै बहिस्कार गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरुको निवास धाउने धुन्धुकारीहरु पेशा र व्यवसायप्रती कहिले प्रदिबद्ध हुने ?
चाहे प्रहरी होस् वा राजादुत, बिकासका सवाल हुन् या आवश्यकताका, राष्ट्रियताका बिषय हुन् वा आत्मसम्मान अनी सार्वभौमिकताका,यी संवेदनशिल बिषयमा सधैं किन निच स्तरको स्वार्थ र सम्झौतापरस्त राजनीति गरिन्छ ?
राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको संघर्श, बलिदानी, त्याग, जेलनेल र कठोर परिश्रमलाई नेपाली जनताले उच्च सम्मान सधैं गरिरहन्छन । बिभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण एैतीहाँसिक उपलब्धिहरुको जस पनि राजनीतिक दलहरुलाई नै जान्छ । तर जबसम्म बिगतका संघर्ष र महान् बलिदानीले सम्वृद्ध बर्तमान र उज्वल भबिष्य भएको राष्ट्र बनाउन सकिदैन तबसम्म ति सबै कठोर परिश्रम फिक्का रहन्छन् । त्यस्ता ईतिहाँसलाई सम्झनु पर्दछ, सम्मान गरिनु पर्दछ तर ईतिहाँसकै गाथा गाएर मात्र बसियो भने बर्तमान बिलिन हुनेछ र भविष्यमा हाम्रै ईतिहाँसको अवसान हुनेछ ।
सिरिया, लिबिया, सुडान अनी दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम जस्ता राष्ट्रहरुबाट के पाठ सिक्ने भन्ने कुरामा सम्भवत सबै दल र त्यसका नेत्रित्वपंति पूर्णरुपमा अवगत छन् । यो यथार्थ हो, जती टिका टिप्पणी र आलोचना गर्नु सहज अनी सरल छ त्यती नै कठिन छ जिम्मेवारी बहन गर्न । तर यो पनि यथार्थ हो, दृढ इच्छाशक्ती र संकल्प छ भने जस्तोसुकै ब्यवधान र कठिनाईको पनि निकास निस्कन्छ । परिवर्तन रातारात हुँदैन, समयको गतिशिलतामा निर्भर हुन्छ तर ति परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकिएन भने ति सम्पूर्ण उपलब्धिहरु फगत कागजमा सिमित रहन्छन् जसको कुनै अौचित्य हुँदैन । हो, समय धेरै अगाडि पुगिसक्यो र हामी धेरै पछाडि छौ यद्यपी निष्ठाको राजनीति अङ्गालेर सकरात्मक कार्य गर्दै सम्वृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने अझै किन अबेर गर्नु ?